Daawo Yaabkan!: Maxay Ahaayeen Erayadii Uu Diego Costa Ku Yidhi Antoine Griezmann Markii Uu Kala Dhex Galay Dagaalkii Umtiti & Costa? - GOOL24.NET
Daawo Yaabkan!: Maxay Ahaayeen Erayadii Uu Diego Costa Ku Yidhi Antoine Griezmann Markii Uu Kala Dhex Galay Dagaalkii Umtiti & Costa?
Gool dhaliyaha xulka qaranka Spain iyo kooxda Atletico Madrid ayaa u muuqda mid aan xataa dhaafayn ciyaartoyda isku kooxda yihiin waxaana soo baxay muuqaalka iyo erayadii uu Diego Costa ku yidhi xidiga ay isku kooxda yihiin ee Antoine Griezmann kaas oo isku dayay in uu kala dhex galo Costa iyo Umtiti oo isku dhacsanaa kulankii Wanda ee La liga.
Kamarada Movistar TV ayaa qabtay erayadii uu sida cadhada leh Costa ugu yidhi Griezmann kaas oo isku dayay in uu nabad ka dhex abuuro xidiga ay isku qaranka yihiin ee Samuel Umtiti iyo Costa oo ay Atletico Madrid u wada ciyaarayeen.
Diego Costa iyo Samuel Umtiti ayaa isku dhacay waxaana soo kala dhex galay garsooraha laakiin markii ay xaaladu hore u degi wayday ee Umtiti iyo Costa uu midba cabasho iyo cadho muujiyay waxa uu Griezmann isku arkay mid labada xidigba u caqli celinkara oo nabad galyo abuuri kara.
Laakiin Diego Costa ayaa qalad wayn u arkay in Griezmann uu qaabkan u dhaqmay wuxuuna u fahmay in uu la saftay Umtiti waxayna kamarada Movistar TV qabtay Costa oo si cadho leh Griezmann ugu sheegaya in ay iyagu isku koox yihiin oo aanu dhinaca saarin Umtiti oo ay qaranimo wadaagaan.
Sida muuqaalka hoose aad ka arki karto Costa ayaa si aan gabasho lahayn faraha ugu taagaya Griezmann wuxuuna muujiyay cadhada uu ka qaaday in qaab aanu jeclaysan uu u kal dhex galay isaga iyo Umtiti.
Sida ay qabtay kamarada Movistar TV waxa u Costa ku yidhi Griezmann: “Aniga ayaa ah ciyaartoyga aad isku kooxda tihiin” wuxuuna muddo sii waday in uu Griezmann cadho ugu muujiyay qaabkii uu iskugu dayay in uu dhex dhexaad ka noqdo murankii u dhexeeyay Umtiti iyo Costa.
Diego Costa oo markii horeba ka cadhaysnaa isku dhicii Samuel Umtiti ayaa markale ka sii cadhooday in Griezmann aanu isaga is garab taagin wuxuuna ka fahmay sidii uu u xagliyay dhinaca xidiga dalkiisa France ee Umtiti.
Haddaba halkan ka daawo qaabkii uu Diego Costa cadhada ugula dhacay xidiga kooxdiisa Griezmann oo uu ku eedeeyay in uu Umtiti oo ay isku xulka France yihiin ka raacay.
— Juanxito_9 (@Juanxito_09) November 25, 2018
Laakiin haddana Griezmann ayaa ahaa ciyaartoygii Costa ka caawiyay goolkiisii ugu horeeyay ee La liga ee uu ka dhaliyay kulankii Barcelona balse waxa uu ka cadhaysnaa in aanu isaga la safan oo uu si dhex dhexaadnimo ah u kala dhex galay Umtiti ama uu xataa u fahmay in uu Umtiti dhinaca saaray.